एफएम रेडियोहरुलाई देशका कुना कुनामा पुर्‍याउनु पर्छ – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
» Advantages of getting no credit check installment loans
एफएम रेडियोहरुलाई देशका कुना कुनामा पुर्‍याउनु पर्छ
- January 1, 2020 मा प्रकाशित
पुरुषोत्तम बस्नेत प्रबन्ध निर्देशक रेडियो नेसन १०३.९ मेगाहर्ज
मुलुकको वर्तमान सञ्चार क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
देश विकासको प्रमुख आधार भनेको सञ्चार हो । सञ्चारबिना विकास सम्भव छैन । जुन ठाउँमा सञ्चारको पहुँच पुगेको छ, त्यो ठाउँको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत सबै प्रकारको विकास भएको छ । सञ्चारले विकासलाई सहयोग गर्छ । तर पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग सहि ढंगमा भएको छैन । सरकार र समाजले सञ्चारलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ । च्याउसरी सञ्चारमाध्यम खुल्नाले समाचारको विश्वसनियतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । जसका कारण पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन, युट्युब लगायत सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरुलाई अलि कठिन अवस्था भने आउन थालेको छ ।
तपाई रेडियो नेसनको जिम्मेवारी सम्हालेर बस्नुभएको छ । अहिले एफएम रेडियोको अवस्था चैं कस्तो छ ?
अरु सञ्चारमाध्यमहरु जस्तै एफएम रेडियोलाई नि निकै कठिन अवस्था छ । यसको मुख्य कारण भनेकै संख्या धेरै हुनु हो । कुन ठाउँमा कतिवटा एफएम रेडियो आवश्यक छ भन्नेबारेमा न त सरकारले कहिले अध्ययन ग¥यो, न त सम्बन्धित अन्य पक्षले नै ध्यान दिए । कम डिफरेन्समा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउँदा अहिले एउटा एफएम रेडियोले अर्कोलाई डिष्टर्ब गर्ने, राम्रोसँग कभरेज हुने ठाउँमा पनि रेडियो नसुनिने समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । यो प्राविधिक पक्षको कुरा भयो । आर्थिक पक्षको कुरा गर्ने हो भने जसको पहुँच छ, जो मार्केटमा नयाँ ढंगले प्रस्तुत हुन सक्छ, जसको व्यापारिक रुपमा सम्बन्ध राम्रो छ उनीहरुलाई मात्र आर्थिक समस्या छैन । अन्यलाई गाह्रो छ ।
एफएमहरुको पहुँच आम श्रोतासम्म पु¥याउन के गर्नुपर्ला ?
रेडियोको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार देशका कुना कुनामा एफएम रेडियो पुग्नुपर्छ । यो काम राज्यको हो । अनि एफएम रेडियोमा श्रोताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझेर त्यो अनुसारको कार्यक्रम वा प्रसारण सामाग्री आउनुपर्छ । अहिले मानिसलाई टाइम पास गर्न धेरै प्रविधि आइसकेका छन् । फेसबुक, ट्वीटरले अन्य सञ्चारमाध्यमको पहुँचतालाई खोसेका छन् । त्यसैले एफएम रेडियो सुन्ने बनाउनका लागि त्यसको सामाग्री राम्रो हुनुपर्छ । श्रोताको सहभागिता अधिकतम हुनुपर्छ । आम जनताको चासोको विषय रेडियोमा आउनुपर्छ ।
एफएमहरुको स्तर घटेको बताइन्छ नि ?
यो सहि हो । आम जनताका माझमा रेडियो पुग्यो, तर विश्वसनियता घट्यो । कतिपय रेडियोहरु पैसामुखी भए, उनीहरुले रेडियोको महत्व र गुणस्तरीयता कायम गर्न सकेनन् । तर सबै रेडियोको स्तर घट्यो भन्न मिल्दैन । देशभरमा रहेका अझै पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढी रेडियोहरु जनताको आवाज बोल्ने प्रयासमा छन् । उनीहरुलाई सरकारले उचित सहयोग गर्नुपर्छ । स्तर पहिलेको भन्दा राम्रो हुन्छ ।
एफएमहरुलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन सरकारको तर्पmबाट के कस्तो नीति ल्याउनुपर्ला ?
सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेकै सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण हो । जसरी अहिले सञ्चार मन्त्रालयले लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरण गरिरहेको छ । त्यसैगरी प्रसारण क्षमताका आधारमा सबै सरकारी विज्ञापन नियम कानुन पालना गरेर बसेका सबै रेडियोलाई समानुपातिक वितरण गर्नुपर्छ । यसले आर्थिक अवस्था निकै राम्रो हुन्छ । यहि नीति र नियम ठूला उद्योग तथा औद्योगिक घरानाहरुले लागू गरेमा सबै रेडियोको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ । स्थानीय निकायले स्थानीय स्तरमा खुलेका रेडियोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
रेडियो नेसनले आमश्रोतामाझ पुग्न के कस्तो तौर तरिका अपनाईरहेको छ ?
हामी अहिले श्रोतामाझ जतिसक्दो धेरै पुग्ने प्रयासमा छौं । श्रोताका लागि चाहिने सबै प्रकारका कार्यक्रमहरु पस्केका छौं । शैक्षिक, सांगितिक, ज्ञानबद्र्धक, मनोरन्जनात्मक सबै प्रकारका कार्यक्रमहरु हामीसँग छ । हाम्रा श्रोता भनेकै आम नागरिक पनि हुन् । त्यसैले उनीहरुमा भएका समस्याहरुलाई पनि सम्बन्धित निकायमा लैजानका लागि हामी मेहनत गरिरहेका छौं । श्रोता सहभागीता जतिसक्यो धेरै गराइरहेका छौं ।
तपाई एउटा जिम्मेवार रेडियोको प्रबन्ध निर्देशकको नाताले मुलुकको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले सोच्ने भनेकै देशमा कस्को सरकार आयो भन्दा पनि सरकारले देशका लागि के के काम ग¥यो भन्ने हो । अहिलेको जनमत प्राप्त सरकारले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति चैं भयो जस्तो लाग्दैन । तर जति काम गरेको छ, देशको अवस्था अनुसार त्यो भने सन्तोषजनक नै छ । सरकारले मुख्य प्राथमिकता विकास निर्माण र सडक आयोजनालाई दिएको जस्तो भान हुन्छ । यदि त्यसो हो भने त्यो राम्रो कुरा हो । पहिले यातायातको पहुँच सबै ठाउँमा पुग्यो भने अरु विकासका कुरा विस्तारै त्यसकै पछि पछि पुगि नै हाल्छ । संघियतामा देश गएको छ । त्यसले केहि राहत त पुगेकै होला । तर केन्द्रीय सरकारले संघिय सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । केहि कुरामा त्यसो गर्न सकेन कि जस्तो चैं लाग्छ ।
नेपालको कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रलाई भारतीय नक्सामा राखिएको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
भारतले नेपालको सिमा मिचेको कुरा कुनै नौलो घटना होइन । पहिलेदेखि नै नेपालले छिमेकी मुलुक भारतको थिचोमिचो सहँदै आएको हो । पछिल्लो समयको घटना पनि उहिलेदेखि नै सरकार चुप लागेर बस्ने कुराको नतिजा हो । टुँडिखेलमा दुईसय जना उफ्रिएर मिचिएको जमिन फिर्ता आउँदैन । यो काम सबै सरकारको हो । सरकारले कसरी हुन्छ कुटनीतिक अन्तराष्ट्रिय पहल गरेर यो कुरा मिलाउनुपर्छ । सिमामा पर्खाल लगाउने अभियान चालिनुपर्छ । सधैं थिचिएर बसेर हुँदैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघलाई सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको हितमा अघि बढ्न तपाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
पत्रकार महासंघ जहिले पनि पत्रकारको हकहितका कुरा मात्र गर्छ । सञ्चारमाध्यमको अवस्था कहिले बुभ्mदैन । सञ्चारमाध्यम जोगिए भने पत्रकार जोगिने हो भन्ने कुरा पत्रकार महासंघले बुभ्mनुपर्छ । म त पत्रकार पनि हुँ, सञ्चारव्यवसायी पनि हुँ । त्यसैले मेरो जोड दुवै पक्षका हितका लागि पत्रकार महासंघ लाग्नुपर्छ भन्नेमा हो, एकोहोरो होइन ।
एफएम रेडियोहरुले राष्ट्रिय हितको पक्षमा कस्ता सामाग्री प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ?
हाम्रो देशमा खड्किएको भनेकै राष्ट्रियता हो । हामी राष्ट्रियताका मामलामा कमजोर छौं । त्यसैले एफएम रेडियोको पहिलो काम भनेको नै आम श्रोतालाई राष्ट्रियता जगाउने काम गर्ने हो । आम नागरिकका चासो र समस्या उजागर गर्नुपर्छ । यसो गर्दा देशले जनताको कुरा सुन्छ । जनताका कुरा देशका मुख्य शासककाबीचमा पु¥याउने खालका सामाग्री प्रसारण गर्नुपर्छ । अन्य संगीत र मनोरञ्जनका कुरा त छँदैछ ।
आम श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
प्रविधिको विकाससँगै श्रोताहरु पनि विभाजित भएका छन् । फेसबुक, युट्युबमा उनीहरुको ध्यान छ । तर मेरो भनाई पहिले र अहिलेको तपाईहरुको दुःखसुखका साथी रेडियोलाई माया नमारिदिनुहोला । तपाईहरुको चाहना के छ ? त्यो भन्नुहोला र त्यहि अनुसारको प्रसारण सामाग्री तयार गर्न साथ दिनुहोला । सबै सञ्चारमाध्मलाई माया गरेर साथ दिनुहोला ।